Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. बुद्धलाई बुझ्ने कसरी? – Janata Live
बुद्ध पूर्णिमा। ५६३ इसापूर्वमा आजकै दिन बुद्धको जन्म लुम्बिनी वनमा भएको थियो।
बुद्धलाई भगवान मानिन्छ। भगवान शब्दका कारण ‘अनिश्वरवादी’ बुद्धलाई किन भगवान भनियो भनेर शंका उत्पन्न हुन सक्छ। यो पनि पढ्नुस्ः ईश्वरका बारेमा के भन्थे बुद्ध?
खासमा बौद्धकालमा भगवान शब्दको अर्थ ‘सृष्टिकर्ता ईश्वर’ भन्नेमा प्रयोग हुन्थेन।
पाली भाषामा ‘भग्गो ति रागो भगवा, भग्गो ति दोसो भगवा, भग्गो ति मोहो भगवा’ अर्थात् जसले राग, द्वेष र मोह भगाउन वा हराउन सक्यो, त्यो नै भगवान भन्ने अर्थमा यो शब्द प्रयोग हुन्थ्यो। आज पनि बुद्धलाई भगवान भनेर सम्बोधन गरिने यही अर्थमा हो, न कि सृष्टिकर्ता ईश्वर मानेर।
बुद्धले आफ्ना भिक्षु-भिक्षुणीलाई पनि ‘बौद्ध’ बन्न सिकाएनन्, बरू बुद्ध बन्न सिकाए। बौद्ध हुनु र बुद्ध बन्नुमा धेरै फरक छ। बुद्धले ‘धम्मी वा धम्मीको’ शब्द प्रयोग गरेका छन् अर्थात धर्मी या धार्मिक बन। बुद्धले अन्धविश्वासी उपासक या प्रार्थी बन्न सिकाएनन्, धर्मका साधक, योगी र तपी (ज्ञानका लागि तप्ने व्यक्ति), श्रमण (निर्वाण मोक्षका लागि श्रम गर्ने व्यक्ति) बन्न भने।
त्यति बेलाका चार्वाक पन्थीहरू ‘यदा जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा, घृतं पिबेत्’ अर्थात जबसम्म बाँच्छौ सुखसँग बाँच, उधारो लिएर भए पनि घिउ खाऊ’ भन्थे।
त्यति बेलाका एकथरी पन्थक, जस्तै चार्वाक सिद्धान्तधारीका लागि त्रिपिटकमा ‘लोकायत’ शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको मतलब यस्तो दर्शन प्रणाली जो यो लोकमा मात्र विश्वास गर्छ, परलोकमा विश्वास गर्दैन। उनीहरूका अनुसार स्वर्ग, नर्क वा मुक्ति केही हुँदैन। मृत्युपछि सबै सकिन्छ। आत्मा हुँदैन, पुनर्जन्म त हुने कुरै भएन। उत्छेदवादी थिए उनीहरू। चार्वाकी सिद्धान्तमा यही मात्र एउटै जीवन हुने भएपछि पाप-पूण्य पनि नहुने भयो र पाप-पूण्यका फल पनि नहुने भए।
बुद्ध एउटै सतत् स्थायी आत्मा नहुने कुरा गर्छन्। जसलाई हामी ‘म वा आत्मा’ भन्छौं, त्यो क्षण-क्षण परिवर्तन भइरहने चित्तधारा हो, शरीर बदलिए झैं आत्मा बदलिरहन्छ। त्यसैले बुद्धले आत्माको पुनर्जन्मभन्दा चित्त-सन्तान भन्ने शब्दमा बढी रुचाएको छन्।
उनले सिकर्मीलाई भनेर चन्दनको काठको भाँडो बनाए। त्यसलाई टोकरीमा राखेर अग्लो बाँसको खम्बामा बाँधिदिए र भने, ‘श्रमण, ब्राह्मण, अर्हन्त या ऋद्दिमान (दैवी शक्ति भएको) ले यो पात्र झिकेर लैजानू।’
अनेक भिक्षु र संन्यासीहरू उनीकहाँ गएर भने, ‘म अर्हन्त हुँ, मलाई यो पात्र देऊ।’
व्यवसायीले भने, ‘यदि अर्हन्त भए पात्र दिइसकेकै हो, झिकेर लैजानू।’
बुद्धले चामत्कारिक प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गरे। चमत्कारले चेला भेला पार्न र जनतालाई मुर्ख बनाउन सके पनि यसबाट कसैको मुक्ति नहुने भन्दै समाधी र प्रज्ञाको अभ्यासमा बढी ध्यान दिन भने। बुद्धले आफूलाई पनि ईश्वरसँग कहिल्यै जोडेनन्। आफू कल्याण मित्र वा गुरु वा मार्गदर्शक भएको बताएका छन्, ‘म त बाटो देखाउने मात्र हो, मुक्तिको मार्गमा हिँड्नु त तिमीहरूले नै पर्छ।’
‘न अतीतको सम्झनामा अड्किएर बस, न भविष्यको कल्पनामा, मनलाई त वर्तमानमा एकाग्र राख। हजार युद्ध जित्नुभन्दा आफूलाई जित्नु राम्रो। तब यो जित तिम्रो हुनेछ।’
बुद्ध शिक्षाको तेस्रो भाग प्रज्ञा हो। मन र पदार्थको हरक्षण निरन्तर भइरहने अन्तर्क्रियालाई यथाभूत जान्ने कार्यले नै प्रज्ञाको उदय हुन्छ, ‘मानिस जस्तो सोच्छ, उस्तै बन्छ। मानिस जस्तो अनुभव गर्छ, उस्तै चिजलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ, र जस्तो कल्पना उस्तै चिजहरूको निर्माण गर्छ।’
त्यसकारण संकल्प राम्रो हुनुपर्नेमा जोड छ बुद्धको। बुद्ध भन्छन्, ‘कुनै कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ भनेर विश्वास नगर। मैले भनेको हुँ भनेर मात्र पनि विश्वास नगर। तब मात्र विश्वास गर जब तिम्रो तर्क र विवेकले ठीक या उचित ठहर्‍याउँछ।’ सेतोपाटीबाट